“သားစိုး ပြောစကားအမှန်လား အမှားလား?” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “သားစိုး ပြောစကားအမှန်လား အမှားလား?”
“သားစိုး ပြောစကားအမှန်လား အမှားလား?”
Posted by buuthee on Jan 19, 2012 in Copy/Paste |7comments
“ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းပြည် ကောင်းစားဖို့ကိုပဲ စဉ်းစားပြီး လုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲ ထောက်ခံသွားမယ့် သားစိုး”
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီမိုကရေစီ ရတယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုဘာမှတော့နားမလည်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် သူပြောသွားတာလဲမှန်ပါတယ်
မှားတာလေးတွေလဲပါကောင်းပါ ပါလိမ့်မယ်…ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်
View all posts by buuthee →
လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ သူ့ ကို တိုက်ခိုက် တဲ့သူတွေ က ပုဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ် တဲ့သူ
တွေပါ၊ ဒေါ်စု ဘာလုပ်လုပ် မျက်စိမှိတ် ထောက်ခံတဲ့သူတွေပေါ့။ဒေါ်စု ကို ကျွန်တော် လည်း ထောက်ခံ
“”ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ အထဲမှာ အရင်တုန်း ကတော့ အခွင့်အရေး ရတဲ့ဘက်မှာ နေပြီး၊ အခုမှ ပြောင်းလာကြတဲ့ လူတွေလည်းပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာလဲဆိုတာ ပရိသတ် က သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်လိပ်ပြာ ၊ကျွန်တော် လုံတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။””
သားစိုးအနေနဲ့ ခုလိုပြောတာကို ကျနော်မငြင်းပါဘူး။သူက အမေစုနဲ့ ပတ်သက်လို့သိရအောင်၊သိအောင် မကြိုးစားခဲ့ဘူးလို့ ဘဲ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ အကုန်ထောက်ခံနေလို့လဲမဖြစ်ဘူးပေါ့။ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဆိုးမြင်မဟုတ်ပဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကန့်ကွက်မှု့တွေလဲလိုအပ်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်မှု့ဆိုတာလဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတာလုပ်ရတဲ့အလုပ်သိပ်များရင်လစ်ကွက်၊ ဟာကွက်ဆိုတာရှိစမြဲပဲလေ။ ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်ဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင်အမေစုလဲကြိုဆိုမှာပါပဲ။ အခုလဲဝေဖန်မှု့တွေကြိုဆိုကြောင်းအမေကပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့လဲဝေဖန်အကြံပေးမယ့်သူတွေ ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့။
How can we measure the performance ofapolitical leader when he/she is not givenachance to prove it? A government hasaprimary duty to serve its people and must ensure the rule of law and rights of citizen/public, so whatagovernment done foracountry is partly doing their jobs while there might be some % of outstanding performance if compared with the rest of the governments. In every country, politicians used to give promises before election period but most of these promises are hardly materialized as Kyant Phyut did in last election. Though there isaright to disagree freely inademocracy, people should think twice before making any comment if they are celebrities because they they said might seriously influenced people who don’t know politics and the worse might be that the people who make comment generously might not be competent in politics.
Please let me correct ” because what they said might seriously influenced people…..
သူပြောသလို အမေစုကကော ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလည်း ဆိုတာကတော့ အပြောနည်းနည်းမတတ်သေးဘူးလို့ပဲဝေဖန်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာ
ပါတီတွေလည်းခွပ်၊လူမျိုးတွေလည်းခွပ်၊အဖွဲ့တွေလည်းခွပ်၊မိသားစုလည်းခွပ် ဒိုင်လုပ်သူကပျော်လိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း ဒို့ဗိုလ်ချူပ်ပြောသလို ကြက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ် မောင်သားစိုးရယ်။